«I-EthicalGEO» -imfuno yokujonga kwakhona umngcipheko weendlela ze-geospatial - Geofumadas
«I-EthicalGEO» - isidingo sokujonga kwakhona umngcipheko weendlela ze-geospatial
Ngo-Okthobha, 2019 Geospatial - GIS
I-American Geographical Society (i-AGS) ifumene isibonelelo kwi-Omidyar Network yokuqalisa incoko yehlabathi jikelele malunga ne-ethos yeetekhnoloji ze-geospatial. Yakhelwe i- "EthicalGEO", eli phulo lifuna ukuba bacinge kuzo zonke iindlela zokuphila kwihlabathi liphela ukuba baveze ezabo izimvo kwimiceli mngeni yokuziphatha yetekhnoloji entsha ye-geospatial ebuyisela umhlaba wethu. Ukukhanya kwenani elikhulayo lezinto ezintsha ezisebenzisa idatha yejografi / itekhnoloji kunye nemiba yezikhokelo ezichanekileyo zokuziphatha, i-EthicalGEO ifuna ukudala iqonga lehlabathi ukuqhubela phambili incoko yababini eyimfuneko.
“KwiAmerican Geographical Society sonwabile kukusebenzisana ne-Omidyar Network kweli phulo libalulekileyo. Sijonge phambili ekuvuleni ulwazi lobuchule bokuziphatha kwendalo eyandisiweyo kunye nokwabelana ngezimvo zabo kunye nelizwe kweliqonga lehlabathi, utshilo uGqirha Christopher Tucker, Umongameli we-AGS.
"Iitekhnoloji zeGeospatial ziyaqhubeka nokuba yinto ebalulekileyo yokwenza oko, nangona kunjalo kukho isidingo esikhulayo sokujongana neziphumo ezingafunekiyo ezinokubakho ngokuvelisa ezobuchwephesha," utshilo uPeter Rabley, iqabane lomngcipheko kwi-Omidyar Network. "Siyavuya ukuxhasa ukumiliselwa kwe-EthicalGEO, eya kusinceda ukuba siqonde ngcono ukuba singazikhusela njani kwimpembelelo ezinokubakho ngelixa sigqibezela ifuthe elihle ubuchwephesha be-geospatial elinokuba nalo ekuqhubeleni isisombululo kwezinye zeengxaki zokucinezela zabantu, ngokuthi Ukunqongophala kwamalungelo epropathi, ukutshintsha kwemozulu kunye nophuhliso lwehlabathi.
Iphulo le-EthicalGEO liya kumema abacinga ukuba bangenise iividiyo ezimfutshane eziqaqambisa eyona mbono yabo ilungileyo yokujongana nemiba yokuziphatha "GEO". Ukusuka kwingqokelela yevidiyo, kuya kukhethwa inani elincinci elizakufumana imali yokwandisa izimvo zabo, kwaye linike isiseko sengxoxo eyongezelelweyo, besenza iklasi yokuqala yamalungu e-FS EthicalGEO Fellows.
Ukufumana olunye ulwazi, tyelela www.ethicalgeo.org.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukudityaniswa koyilo-ukuzibophelela kwi-BIM ephambili ngamawele edijithali
Post Next Iinkonzo ezintsha zefu le-iTwin yeenjineli zamaseko edijithaliOkulandelayo »